သူခိုး မှအိမ်ရှင်ကို ဓားနဲ့ခုတ်ပြီးပြေးရာ သူခိုး ငါး ထပ်တိုက်ပေါ် ကပြုတ်ကျပြီး သူ ခိုးရော အိမ်ရှင် ပါ အရေးပေါ်အခြေအနေဖြင့် ​ဆေးရုံရောက်… – Shwewiki.com
၂ ၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၁၉ရက် ည(၁၁း၃၀) အချိန် ခန့်က ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက် ကျွန်းတော(၁)လမ်း ရှိ ၅ထပ်တိုက် ငါးလွှာ အခန်းအမှတ်(5.B)တွင် ဦးမောင်မောင်(ခ) ဦးဟူစိန် တစ်ဦးတည်းရှိနေစဉ်….
တိုက်ခန်းအတွင်းသို့ အမျိုးသားတစ်ဦး ဝင်လာပြီး ဓားဖြင့်ထိုးခုတ်၍ နှစ်ဦးသား လုံးထွေးသတ်ပုတ်အော်ဟစ်သံကြောင့် ဘေးခန်းရှိ ၎င်း၏ မိသားစုဝင်များ ထွက်လာကြသဖြင့်… အဆိုပါ အမျိုးသားမှာ တိုက်ခန်းအနောက်ပေါက်မှ ထွက်ပြေးရာ တိုက်ပေါ်မှပြုတ်ကျပြီး သတိလစ်သွားပါသည်။
ဓားဒဏ်ရာကြောင့်…. အိမ်ရှင် ဦးမောင်မောင်(ခ)ဦးဟူစိန် (၅၉ နှစ်)တွင် ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အမှတ်(၅)ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးအောင်ဝင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ အခင်းဖြစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိလာကာ ၎င်းတို့နှစ်ဦးအား မြဝတီခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်​ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သူခိုးမှအိမျရှငျကို ဓားနဲ့ခုတျပွီးပွေးရာ သူခိုး ငါးထပျတိုကျပျေါကပွုတျကပြွီး သူခိုးရော အိမျရှငျပါ အရေးပျေါအခွအေနဖွေငျ့ ဆေးရုံရောကျ…
၂၀၂၀ ဇနျနဝါရီ ၁၉ရကျ ည(၁၁း၃၀) အခြိနျ ခနျ့က ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့ အမှတျ(၅)ရပျကှကျ ကြှနျးတော(၁)လမျး ရှိ ၅ထပျတိုကျ ငါးလှာ အခနျးအမှတျ(5.B)တှငျ ဦးမောငျမောငျ(ခ) ဦးဟူစိနျ တဈဦးတညျးရှိနစေဉျ…. တိုကျခနျးအတှငျးသို့ အမြိုးသားတဈဦး ဝငျလာပွီး ဓားဖွငျ့ထိုးခုတျ၍ နှဈဦးသား
လုံးထှေးသတျပုတျအျောဟဈသံကွောငျ့ ဘေးခနျးရှိ ၎င်းငျး၏ မိသားစုဝငျမြား ထှကျလာကွသဖွငျ့… အဆိုပါ အမြိုးသားမှာ တိုကျခနျးအနောကျပေါကျမှ ထှကျပွေးရာ တိုကျပျေါမှပွုတျကပြွီး သတိလဈသှားပါသညျ။
ဓားဒဏျရာကွောငျ့…. အိမျရှငျ ဦးမောငျမောငျ(ခ)ဦးဟူစိနျ (၅၉ နှဈ)တှငျ ပွငျးထနျစှာ ဒဏျရာရရှိခဲ့ပါသညျ။
ထိုသို့ ဖွဈပှားမှုကွောငျ့ အမှတျ(၅)ရပျကှကျ အုပျခြုပျရေးမှုး ဦးအောငျဝငျးနှငျ့ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ဝငျမြားမှ အခငျးဖွဈနရောသို့ ရောကျရှိလာကာ ၎င်းငျးတို့နှဈဦးအား မွဝတီခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။